ဒါကတော့ video editing စာအုပ်လေးပါ . ဟိုတစ်လောက တောင်းဆိုထားတဲ့ ညီလေးအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြ လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . မြန်မာလို ရေးထားတာ လေးပါ. video editing သမားများအတွက် အတော်လေး ကောင်းမွန်ပါတယ် . လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ . လိုချင်သူများ အောက်မှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ .@nyinaymin
up4vn.com | Rapidshare | Megaupload | Depositfiles | Mediafire | Ifile.it | Hotfi
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 11:15 AM